चीनका बरिष्ठ वैज्ञानिकको भविष्यवाणी–‘४ हप्तामा विश्व सामान्य अवस्थामा फर्कन थाल्नेछ’ – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/चीनका बरिष्ठ वैज्ञानिकको भविष्यवाणी–‘४ हप्तामा विश्व सामान्य अवस्थामा फर्कन थाल्नेछ’
चीनका सबैभन्दा बरिष्ठ कोरोना भाइरस विशेषज्ञले आगामी ४ हप्तामा पूरै वि`श्वको अवस्था बदलिने भविष्यवाणी गरेका छन् । उनले आगामी ४ हप्तामा पूरै विश्वको अवस्था पहिलेजस्तै सामान्य अवस्थामा फर्कन सुरु हुने बताएका हुन् । उनका अनुसार यो अवधिपछि कोरोना भाइरसका नयाँ संक्र`मणका केसमा कमी आउनेछ । उनले चीनमा अब कोरोना भाइरसको दोस्रो आक्रमण नहुने समेत भविष्यवाणी गरेका छन् ।
कोरोनाभाइरस संक्र`मण नियन्त्रण र उपचारका लागि चीन सरकारले गठन गरेको मुख्य टिमका प्रमुख डा. झांग नेनशेनले यस्तो भविष्यवाणी गरेका हुन् । ८३ वर्षीय झां`गले भने ‘चीनमा कोरोना भाइरसको दोस्रो आक्रमण हुने छैन किनकि हामीले मनिटरिङ सिस्टमलाई अत्यन्तै बलियो बनाएका छौं ।’ डा. नेनशेनले शेनझेनको एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा यस्तो बताएको डेलिमेलले उल्लेख गरेको छ ।
डा. नेनशेनले भने ‘कोरोना भाइरससँग लड्ने २ मात्र तरिका छन् । पहिलो हामीले संक्र`मणको दरलाई सबैभन्दा कम स्टरमा जैजाउँ र त्यसलाई बढ्नबाट रोकौं । यसबाट हामीलाई भ्याक्सिन बनाउन समय प्राप्त हुनेछ र हामीले यो रोगलाई समाप्त गर्न सक्नेछौं । दोस्रो तरिका यो हो कि संक्र`मणमा ढिलाइ ल्याउँ र आफ्ना केही बिरामीको सं`ख्यालाई अलग अलग तरिकाले कम गरौं । धेरैजसो देशले कोरोनाभाइरसको संक्र`मणलाई लिएर कडा कदम उठाएका छन् । यस्तोमा मलाई आशा छ कि आगामी ४ हप्तामा नयाँ संक्र`मित भेटिन लगभग बन्द हुनेछ ।’
डा. झांगले अहिले पनि चीनमा लाखौं साइलेन्ट कोरोना क्यारियर भएको हल्ला फैलाइएको भन्दै यो झुटो भएको बताए । उनले भने ‘हामीले ती सबै बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गरिसकेका छौं जसमा भाइरसको संक्र`मण छ तर लक्षण देखिएको छेन । यस्ता बिरामीलाई एसिम्टोम्याटिक केस भनिन्छ । एसिम्टोम्याटिक केसबाट संक्रमण बढ्ने खतरा चीनमा धेरै छैन । किनकि अहिलेसम्म हामीले यसको प्रमाण भेटेका छैनौं ।’
डा. झांगले जो बिरामी यो भाइरसबाट संक्र`मित भएर निको भइसकेका छन् उनीहरु पुनः यो भाइरबाट संक्र`मित हुने आशंका निकै कम भएको बताए । यदि यस किसिमका केस आइहालेमा पनि उनीहरुबाट संक्र`मण फैलिने खतरा निकै कम हुने उनले बताए । ‘यो दुर्लभ हो किनकि उनीहरुको शरीरमा पहिलेदेखि नै एन्टिबडीहरु हुन्छन् जो भाइरससँग लडिरहेका हुन्छन्’ उनले भने ।
कसैले तिमीलाई दुखी बनाउँछ भने उसको वास्ता नै नगर – `रुमी`